Boqortooyada Ilaah waa soo dhowdahay, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Baasasabbo sameeya, waayo, boqortooyadii jannadu waa dhow dahay. Yooxanaa Baabtiisaha iyo Ciise ayaa ku dhawaaqaya u dhowaanta boqortooyada Ilaah (Matayos 3,2; 4,17; Mark 1,15). Xukunka mudada dheer la sugayay ee Ilaah ayaa soo dhowaaday. Farriintan waxaa loogu yeedhay injiilka, warka wanaagsan. Kumaan kun waxay jeclaayeen inay maqlaan oo ka jawaabaan farriintan ka socota Yooxanaa iyo Ciise.
Laakiin wax yar ka fikir jawaab celintu sidii ay ahaan lahayd haddii aad dadka ku wacdiyi lahayd: "Boqortooyada Ilaah weli 2000 oo sano ayaa ay ka hadhsan tahay." Farriinta ayaa noqon lahayd mid niyad jab leh jawaabta dadwaynahuna way waliba niyad jabeen. Ciisena waxaa laga yaabaa inuusan caan ku ahayn, hoggaamiyeyaasha diinta waxaa laga yaabaa inaanay ka masayrin, oo ciise malaha iskutallaabta laguma qodbay. "Boqortooyada Ilaah waa fog tahay" ma noqon lahayd war cusub ama mid wanaagsan.
Dad badan oo Yuhuud ah oo ku noolaa qarnigii hore waxay ogaayeen ereyga "Boqortooyada Ilaah". Waxay si aad ah u jeclaayeen in Ilaah u diro hoggaamiye diidi doona xukunka Roomaanka oo ka dhigaya Yahuudda mar kale inay noqdaan qaran ku tiirsanaan - oo ah quruun caddaalad, ammaan iyo barakeysan, oo ah ummad qof walba loo soo jiidan doono.
Xaaladda cimiladaan - filasho xiiso leh laakiin muuqata oo ku saabsan faragalinta-Ilaah go'aamiyay - Ciise iyo Yooxanaa waxay ku wacdiyeen u dhowaanta boqortooyada Ilaah. Ciise wuxuu xertiisii ​​ku yidhi, Boqortooyada Ilaah waa soo dhowaatay, ka dib markay bogsiiyeen kuwa buka (Matayos 10,7; Luukos 19,9.11).
Boqortooyada ciise ma ahayn filasho caan ah - sida aynu ka qiyaasi karno xaqiiqda ah in dad badan oo yuhuud ah ay jeclaayeen inay arkaan inuu dhintay. Boqortooyadiisu waxay ka baxday dunidan (Yooxanaa 18,36). Markuu ka hadlay "Boqortooyada Ilaah" wuxuu adeegsaday ereyo ay dadku si wanaagsan u fahmaan, laakiin wuxuu iyaga siiyey macno cusub. Wuxuu u sheegay Nikodemos in boqortooyadii Ilaah aan laga arki karin dadka intiisa badan (Yooxanaa 3,3) - in la garto ama la waayo-aragnimo loo yeesho, waa in qof loo cusbooneysiiyaa Ruuxa Quduuska ah ee Ilaah (V. 6). Boqortooyada Ilaah waxay ahayd boqortooyo ruuxi ah, oo aan ahayn hay'ad jireed.
In wax sii sheegidda ee Buur Saytuun, Ciise wuxuu ku dhawaaqay in boqortooyada Ilaah ay imaan doonto ka dib calaamado iyo dhacdooyin sheegid. Laakiin qaar ka mid ah waxbaristii Ciise iyo tusaalayaashii waxay sharraxeen in boqortooyada Ilaah ayan si lamafilaan ah ugu imaan doonin. Abuurku aamusnaan buu ku baxaa (Mark 4,26-29); Boqortooyada ayaa bilaabata sida iniin khardal le'eg (V. 30-32) oo wuxuu u qarsoon yahay sida dhanaan (Matayos 13,33). Maahmaahyadani waxay soo jeedinayaan in Boqortooyada Ilaahay ay dhab tahay ka hor intaysan ku imaan qaab awood leh oo layaab leh. Ka sokow xaqiiqda inay tahay mustaqbal dhab ah, durba waa dhab.
Aynu tixgelinno qaar ka mid ah aayadaha muujinaya in Boqortooyada Ilaah ay horayba u shaqeyneyso. Mark 1,15 Ciise wuxuu ku dhawaaqay: "Wakhtigii waa dhammaaday ... boqortooyada Ilaah waa timid." Labada ficil ayaa ku jira xiisadda hore, taas oo muujineysa in wax dhacay iyo in cawaaqibkiisu sii socon doono. Wakhtigu wuxuu u yimid oo keliya kuma dhawaaqiddiisa, laakiin sidoo kale waxaa loogu talagalay boqortooyada Ilaah lafteeda.
Ka dib markuu jinniyada ka saaray, Ciise wuxuu yidhi: "Laakiin haddaan jinniyada ku saaro Ruuxa Ilaah, waxaa idiin timid boqortooyada Ilaah" (Matayos 12,2; Luukos 11,20). Salka dhabta ahi waa halkaan, ayuu yidhi, cadeyntuna waxay kujirtaa eryida jinniyada xunxun. Caddayntani waxay ku sii socotaa Kaniisadda maanta maxaa yeelay Kaniisadda waxay qabataa shaqooyin ka weyn kan uu qabtay Ciise (Yooxanaa 14,12). Waxaan sidoo kale oran karnaa: "Haddii aan ku tuurayno jinniyada sharka leh xagga Ruuxa Ilaah, markaa Boqortooyada Ilaah way shaqeyn doontaa halkan iyo maanta." Iyada oo loo marayo Ruuxa Ilaah, Boqortooyada Ilaah waxay sii wadaysaa inay muujiso awooddeeda lama huraanka u ah boqortooyada Shaydaanka.
Shaydaanku wali saameyn buu ku leeyahay, laakiin waa laga adkaaday oo la xukumay (Yooxanaa 16,11). Qayb ahaan waa la xaddiday (Mark 3,27). Ciise wuu ka adkaaday dunida shaydaan (Yooxanaa 16,33) iyo caawimaadda Ilaahay waan ka adkaan karnaa iyaga (1 Yooxanaa 5,4). Laakiin maahan in qof walba ka adkaado iyaga. Da'daan, Boqortooyada Ilaahay waxay kujirtaa wanaag iyo xumaanba (Matayos 13,24: 30-36. 43-47. 50-24,45; 51-25,1; 12-14. 30). Shaydaanku wali waa saameyn. Waxaan wali sugeynaa mustaqbalkii wanaagsanaa ee Boqortooyada Ilaahay.
Boqortooyada Ilaahay waxay ku firfircoontahay waxbarista
«Boqortooyada jannada weli waa ay la il daran tahay rabshadaha oo kuwa rabshaduhu la wareegaan» (Matayos 11,12). Ficilladaani waa qaab hadda jira - boqortooyadii Ilaah waxay jirtay wakhtigii ciise. Sidoo kale marin isku mid ah, Luukos 16,16, ayaa sidoo kale adeegsanaysa fallada ereyga ee hadda taagan: “… qof walbana xoog buu ku galayaa”. Ma aha inaan ogaano kuwa xadgudbayaashani yihiin ama sababta ay rabshadaha u adeegsadaan
- Waa muhiim halkan in aayadahani ay ka hadlaan Boqortooyada Ilaah oo ah xaqiiqo jirta.
Luukos 16,16 wuxuu ku badalayaa qeybta hore ee aayada “Injiilka oo uu Baajiyay Boqortooyada Ilaah”. Kala duwanaanshahaani wuxuu soo jeedinayaa in horumarka boqortooyooyinka ee da’dan uu si ficil ahaan ah ula mid yahay baahintiisa. Boqortooyada Ilaah waa - mar horeba way jirtay - wayna ku sii wadaysaa baahinteeda.
Mark 10,15, Ciise wuxuu tilmaamay in Boqortooyada Ilaah ay tahay wax aan ku qasbanahay inaan helno si uun, si muuqata noloshan. Sidee Boqortooyada Ilaah u jirtaa? Faahfaahinta wali ma cadda, laakiin aayadaha aan eegnay waxay leeyihiin hadda.
Farrisiinta qaar ayaa weydiiyay Ciise goorta boqortooyada Ilaah imaanayso (Luukos 17,20). Wuxuu ku yidhi, Wax arki maysid. Laakiin Ciise wuxuu kaloo yiri: «Boqortooyada Ilaah waa idinku dhex jirta [a. . dhexdaada] » (Luukos 17,21). Ciise wuxuu ahaa boqorka, waayo wuxuu baray oo uu mucjisooyin ka dhex sameeyay, boqortooyadu waxay ka mid ahayd Farrisiinta. Ciisena wuu inagu dhex jiraa maanta, iyo sidii boqortooyadii Ilaah ay uga dhex muuqatay shaqada Ciise, sidoo kale waxay joogtaa adeegga kaniisadiisa. Boqorka baa dhexdeena ah; Awooddiisa ruuxiisu way inagu dhex jirtaa, xitaa haddii boqortooyadii Eebbe weli aan weli ku shaqeyn awooddeeda oo buuxda.
Horay ayaa naloogu wareejiyay Boqortooyada Ilaahay (Kolosay 1,13). Waxaan hadda helnaa boqortooyo iyo jawaabteena saxda ah ee taasi waa cibaadada iyo cabsida (Cibraaniyada 12,28). Masiixu wuxuu inagaga dhigay boqortooyo wadaaddadii. (Muujintii 1,6). Waxaan nahay dad quduus ah hadda iyo hadda - laakiin waxa aan ahaan doonno weli lama muujin. Ilaah wuxuu inaga xoreeyey xukunka dembiga, wuxuuna ina geliyey boqortooyadiisa xukunkiisa xoogga leh. Ciise ayaa yidhi, Boqortooyada Ilaah waa halkan. Dhagaystayaashiisu ma ahayn inay sugaan Masiixa guuleysta - Eebbe ayaa xukumaya haddaba waa inaan hadda ku noolaano jidkiisa. Wali ma hayno dhul, laakiin waxaan hoos imaanaa xukunka Ilaahay.
Fahamka in Boqortooyada Ilaah horey ujirtey waxay naga caawineysaa inaan taxadar gaar ah siino u adeegida kuwa nagu hareereysan. Laakiin ma hilmaamno in dhammaystirka Boqortooyada Ilaahay ay weli tahay mustaqbalka. Haddii rajadayadu ku jirto da'daan oo keliya, waxaan haysannaa rajo yar (1 Korintos 15,19). Annagu kama lihin wax fikir ah oo ku saabsan ku soo qaadashada boqortooyada Ilaah dadaalka aadanaha Markaan wajaho dib-u-dhac iyo silcin, markaan aragno in dadka intiisa badani diidaan injiilka, waxaan ka helnaa xoog xagga aqoonta ah in buuxinta Boqortooyada ay tahay jiil mustaqbal ah.
Aayado badan ayaa inoo sheegaya in Boqortooyada Ilaah ay noqon doonto mustaqbal cajiib ah. Waan ognahay inuu Masiixu boqor yahay, waxaana u rajeyneynaa maalinta uu awoodiisa u adeegsan doono qaab weyn oo riwaayad ah si uu u soo afjaro dhibanaha. Buugga Daanyeel wuxuu saadaaliyay boqortooyo Ilaah oo u talin doonta dunida oo dhan (Daanyeel 2,44; 7,13-14. 22). Buuga Axdiga Cusub ee Muujintii ayaa qeexaya imaatinkiisa (Muujintii 11,15:19,11; 16).
Waxaan u duceyneynaa inay boqortooyada timaado (Luukos 11,2). Saboolka liita iyo kuwa la silciyo waxay sugaan mustaqbalkooda "abaalmarinta jannada" (Matayos 5,3.10.12). Dadku waxay ku imaan doonaan Boqortooyada Ilaah 'maalin' xukunka (Matayos 7,21: 23-13,22; Luukos 30). Ciise masaal buu ku yidhi sababta oo ah qaar waxay aaminsan yihiin in boqortooyada Ilaah dhaqso u iman doonto (Luukos 19,11). Wax sii sheegidda ee Buur Saytuun, Ciise wuxuu ku sifeeyey dhacdooyin yaab leh oo dhici doona ka hor soo laabashadiisa xoogga iyo ammaanta. Wax yar kahor iskutallaabta lagu qodbay, Ciise wuxuu sugayay boqortooyo mustaqbalka (Matayos 26,29).
Bawlos wuxuu ku hadlay dhowr jeer "dhaxalka boqortooyada" oo ah khibrad mustaqbal (1 Korintos 6,9-10; 15,50; Galatiya 5,21; Efesos 5,5) iyo, dhinaca kale, waxay ku muujinayaan luqaddiisa inuu u tixgelinayo boqortooyada Ilaah inay tahay wax la gaari doono dhammaadka da'da. (2 Tesaloniika 2,12:2; 1,5 Tesaloniika 4,11: 2; Kolosay 4,1.18; Timoteyos,). Markuu Bawlos diiradda saarayay muujinta boqortooyada ee hadda jirta, wuxuu isku dayayaa inuu soo bandhigo ereyga "caddaalad" oo ay weheliso "boqortooyada Ilaah". (Rooma 14,17) ama halkii loo isticmaali lahaa (Rooma 1,17). Eeg Matayos 6,33 xiriirka dhow ee ka dhexeeya Boqortooyada Ilaah iyo xaqnimada Ilaah. Ama Bawlos wuu xanaaqay (haddii kale) si aad boqortooyada ugu xirato Masiixa bedelkii Ilaaha Aabbaha ah (Kolosay 1,13). (J. Ramsey Michaels, "Boqortooyada Eebbe iyo Taariikhda Ciise"), Jabtarka 8aad, Boqortooyada Allah tarjumaadda qarniga 20-aad, waxaa daabacay Wendell Willis [Hendrickson, 1987, bogga 112).
Qormo badan oo "Boqortooyada Ilaah" ah ayaa tixraaci kara Boqortooyada Ilaah ee hadda jirta iyo sidoo kale fulinta mustaqbalka. Sharciyeyaasha waxaa loogu yeedhi doonaa kan ugu yar boqortooyada jannada (Matayos 5,19: 20). Waxaan uga tagnaa qoysaska danta boqortooyada Ilaah darteed (Luukos 18,29). Waxaan ku galnaa boqortooyada Ilaah annagoo adeegsaneyna dhibaatooyin (Falimaha Rasuullada 14,22). Waxa ugu muhiimsan ee maqaalkani waa in aayadaha qaarkood ay ku caddaadaan xiisadda taagan, qaarna ay si cad ugu qoran yihiin xiisadda mustaqbalka.
Sarakiciddii Ciise ka dib, xertii waxay weyddiiyeen: "Sayidow, miyaad dib u dhisi doontaa boqortooyada Israa'iil waqtigan xaadirka ah?" (Falimaha Rasuullada 1,6). Muxuu Ciise ugu jawaabayaa su’aashaas oo kale? Waxa xertu ugu jeedeen "boqortooyo" ma ahayn wixii Ciise baray. Xertiisu wali waxay ka fekerayeen sidii loo heli lahaa boqortooyo qaran halkii ay ka ahaan lahaayeen dad tartiib tartiib ah u kora oo ka kooban dhammaan kooxaha qowmiyadeed. Waxay ku qaadatay sannado inay gartaan in jaahiliinta lagu soo dhaweynayo boqortooyada cusub. Boqortooyada Masiixu wali way ka baxsan tahay dunidan, laakiin waa inay ahaataa mid firfircoon da'dan. Marka Ciise ma dhihi haa ama maya - wuxuu kaliya u sheegay inay jirto shaqo iyaga iyo xoog ay ku qabtaan shaqadan (Aayadaha 7aad).
Matayos 25,34 wuxuu inoo sheegayaa in Boqortooyada Ilaah ay diyaar garow ugu jirtay tan iyo aasaaskii dunida. Waxay jirtay weligeedba, si kastaba ha noqotee qaabab kala duwan. Ilaah wuxuu Aadan u ahaa Aadan iyo Xaawo; Wuxuu siiyey amar iyo amar ay wax ku xukumaan; Waxay ahaayeen Ku xigeenkiisii ​​Jannada Ceeden. In kasta oo ereyga "boqortooyo" aan la adeegsan, haddana Aadan iyo Xaawo waxay ku sugnaayeen boqortooyadii Ilaah - oo ay hoos imaanaysay xukunkiisa iyo hantidiisa.
Markuu Eebbe ballan qaaday Ibraahim in farcankiisu ay dad badan noqon doonaan iyo in boqorro iyaga ka iman doonaan (Bilowgii 1: 17,5-6), wuxuu u ballan qaaday boqortooyo Ilaah. Laakiin way yaraatay, sida baydhada oo kale, waxayna qaadatay boqolaal sano in la arko ballanka.
Markii Ilaah reer binu Israa'iil ka soo saaray Masar oo uu axdi la dhigtay, waxay noqdeen boqortooyo wadaaddadii (Baxniintii 2: 19,6), waa boqortooyadii Ilaah u lahaa oo loogu yeedhi karo boqortooyadii Ilaah. Axdigii uu iyaga la dhigtay wuxuu la mid yahay heshiisyadii ay boqorradii xoogga badnaa la sameeyeen quruumo yaryar. Isagaa badbaadiyey reer binu Israa'iilna way u jawaabeen - oo waxay aqbaleen inay noqdaan dadkiisa. Ilaah wuxuu ahaa boqorkooda (1 Samuu'eel 12,12:8,7;). Daa'uud iyo Sulaymaanna waxay ku fadhiyeen carshigii Ilaah, oo wax buu ku xukumay magiciisa (1Chr 29,23). Israa'iilna waxay ahayd boqortooyadii Ilaah.
Laakiinse dadku ma ay addeecin Ilaahooda. Ilaah baa iska diray, laakiinse isagu wuxuu ballan qaaday inuu dalka ku soo celin doono qalbi cusub (Yeremyaah 31,31-33), sheegid lagu fuliyay kaniisada maanta la wadaagaya Axdiga Cusub. Annaga, oo Ruuxa Quduuska ah la siiyey, waa wadaadnimada wadaadnimada iyo quruun qoduus ah oo reer binu Israa'iilkii hore aysan awoodin inay sameeyaan (1 Butros 2,9; Baxniintii 2). Wir sind im Reich Gottes, aber es gibt jetzt Unkraut, das zwischen dem Getreide wächst. Am Ende des Zeitalters wird der Messias in Macht und Herrlichkeit zurückkehren, und das Reich Gottes wird erneut im Aussehen verwandelt werden. Das Reich, das dem Millennium folgt, in dem jeder perfekt und geistlich ist, wird sich vom Millennium drastisch unterscheiden.
Maadaama ay boqortooyadu leedahay sii wadis taariikhi ah, waxaa sax ah in laga hadlo arinta marxaladihii hore, hadda iyo mustaqbalkaba. Horumarkeedii taariikhiga ahaa, waxay ku tallaabsatay horumarro waa weyn waxayna sii wadi doontaa inay sidaas yeelato marxalado cusub oo bilaabanaya. Boqortooyada waxaa lagu taagay Buur Siinay; waxaa lagu koray shaqadii Ciise; waxaana loo diyaarin doonaa soo laabashadiisa xukunkeeda ka dib. Marxalada kasta, dadka Ilaah waxay ku farxi doonaan waxay leeyihiin oo waxay ku rayrayn doonaan waxa soo socda. Maaddaama aan hadda la kulanno qaar ka mid ah qaybaha xadidan ee Boqortooyada Ilaah, waxaan ku kalsoon nahay in mustaqbalka boqortooyada Ilaah ay sidoo kale noqon doonto mid dhab ah. Ruuxa Quduuska ahi waa dammaanadeena barakooyinka weyn (2 Korintos 5,5:1,14; Efesos).
Goormaan maqli doonaa ereyga boqortooyada ama boqortooyada, waxaa lagu xasuusin doonaa boqortooyooyinkii dunidan. Adduunkan, boqortooyadu waxay la xiriirtaa awood iyo xoog, laakiin kuma xirna wada noolaanshaha iyo jacaylka. Boqortooyada ayaa sharxi karta awooda uu Eebbe ku leeyahay qoyskiisa, laakiin ma qeexeyso dhammaan ducooyinka uu Eebbe ina siiyay. Taasi waa sababta sawirro kale loo istcimaalo, sida ereyga qoyska ee carruurta, kaasoo carrabka ku adkeeya jacaylka Ilaah iyo amarrada.
Erey kastaa waa sax laakiin waa dhammaystir. Haddii eray kasta uu sifiican u sharraxi karo badbaadada, haddana Kitaabka Quduuska ah ayaa ereygaas oo dhan isticmaali doona. Laakiin dhammaantood waa sawirro, mid walbana wuxuu sharraxayaa qayb ka mid ah badbaadada - laakiin ereyadan midkoodna ma sharraxaa sawir dhan. Markuu Eebbe faray Kaniisadda inay injiilka ku wacdiso, kama uusan hor istaagin isticmaalka ereyga "Boqortooyada Ilaah". Rasuulladu waxay u tarjumeen khudbadihii Ciise Carabiga sidii Gariigta, waxayna u turjunteen sanamyo kale, gaar ahaan tusaalooyin, kuwaas oo muhiim u ahaa dhagaystayaasha aan Yuhuudda ahayn. Matthäus, Markus iyo Lukas waxay badanaa adeegsadaan ereyga "Boqortooyada". Yooxanaa iyo xuruufta rasuulku waxay kaloo sharraxayaan mustaqbalkeenna, laakiin waxay u adeegsadaan sawirro kale tan si ay tan u caddeeyaan.
Badbaadadu waa erey guud oo guud. Bawlos wuxuu yidhi waan badbaadinay (Efesos 2,8), waynu badbaadinnay (2 Korintos 2,15) waana badbaadi doonnaa (Rooma 5,9). Ilaah wuxuu ina siiyay badbaadada wuxuuna naga rajeynayaa inaan ugu jawaabno isaga si iimaan leh. Yooxanaa wuxuu wax ka qoray badbaadada iyo nolosha weligeed ah sida xaqiiqada jirta, lahaanshaha (1 Yooxanaa 5,11: 12) iyo duco mustaqbal leh.
Markuu Ciise ka hadlay Boqortooyada Ilaah, isagu ma uusan carrabka ku adkayn barakooyinka jirkiisa ama muu caddeyn taariikhdiisa. Taabadalkeed, wuxuu diiradda saaray wixii dadku sameyn lahaayeen si ay qayb uga noqdaan. Cashuurqaadayaashii iyo dhillooyinkii waxay ku yimaadeen boqortooyada Ilaah, ayaa yidhi (Matayos 21,31), waxayna sidaas sameeyaan iyagoo rumaysta injiilka (V. 32) oo yeelo doonista aabaha (Aayadaha 28aad). Waxaan galaynaa boqortooyada Ilaah markii aan uga jawaabno Ilaah aaminnimo iyo aaminnimo.
Mark 10, qof ayaa doonayay inuu dhaxlo nolosha weligeed ah, oo Ciise wuxuu yidhi waa inuu ilaaliyaa awaamiirta (Mark 10,17-19). Ciisena wuxuu kaloo ku daray amar kale: Wuxuu ku amray inuunnada oo dhan ha u bixiyo khasnadda jannada ku jirta (V. 21). Ciise xertii ayuu u celiyay: "Way ku adag tahay inay taajir ku noqdaan inay boqortooyada Ilaah galaan!" (V. 23). Xertii waxay weyddiiyeen: "Haddaba yaa badbaadi kara?" (V. 26). Qaybtan iyo marinka isbarbar dhiga ee Luukos 18,18: 30, dhowr ereyo ayaa loo adeegsaday oo tilmaamaya isla shaygan: hel boqortooyada, dhaxal nolosha weligeed ah, hanti ururso jannada, gal boqortooyada Ilaah, badbaadi. Ciise markuu yidhi, "I soo raac" (V. 22), wuxuu adeegsanayaa muujinta kale si uu u muujiyo isla shaygan: waxaynu galaynaa boqortooyada Ilaah annagoo nolosheenna isku hagaajinay Ciise.
Luukos 12,31: 34-21,28, Ciise wuxuu farta ku fiiqay in dhowr tibaaxood ay isku mid yihiin: raadinta boqortooyadii Ilaah, heshaa boqortooyo, oo khasnado cirka ku leh, ka tanaasulka waxyaalaha hantida. Waxaan dooneynaa boqortooyadii Ilaah anagoo ka jawaab celinayna waxbaristii Ciise. Luukos 30:20,22 iyo 32 boqortooyada Ilaah waxay la mid tahay madax furasho. Falimaha Rasuullada, waxaan ku baranaa in Bawlos wacdiyey injiilka boqortooyada, oo uu ku wacdiyey injiilka nimcadiisa iyo iimaanka Eebbe. Boqortooyada ayaa xiriir dhow la leh badbaadada - boqortooyadu uma qalmi karto wacdinta haddii aanaan qayb ku lahayn, waxaanan ku gali karnaa oo kaliya iimaan, tawbadkeen, iyo nimco, markaa kuwanu waa qayb ka mid ah farriinta kasta ee ku saabsan boqortooyada Ilaah. Badbaadadu waa xaqiiq jirta iyo sidoo kale ballanqaad barakada mustaqbalka.
Korintos Bawlos waxba kuma wacdiyin Masiixa iyo iskutallaabtiisa mooyaane (1 Korintos 2,2). Falimaha Rasuullada 28,23.29.31,, Luukos wuxuu inoo sheegayaa in Bawlos wacdiyey boqortooyadii Ilaah iyo sidoo kale Ciise iyo badbaadada Rooma. Kuwani waa dhinacyo kala duwan oo isla farriinta masiixiga ah.